Hay’ada Nabadsugida iyo sirdoonka Soomaaliya oo sheegtay inay qabatay rag shabaab ah. – The Voice of Northeastern Kenya
Hay’ada Nabadsugida iyo sirdoonka Soomaaliya oo sheegtay inay qabatay rag shabaab ah.
Taliska ciidanka Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen inay gacanta ku dhigay nin ka tirsan Al Shabaab, kadib hawlgal gaar ah oo ay fuliyeen Ciidamada Hay’adaasi.
NISA ayaa sheegtay hawlgalkaan uu ahaa mid qorsheysan islamarkaana Ninkaan waqtiyo badan baadi goob iyo dabagal ay ku hayeen ugu danbayna ay gacanta ku soo dhigeen.
Warka ay hay’ada sirdoonka Soomaaliya ee NISA ku qortay Barteeda Rasmiga ee Tweetarka waxay ku sheegtay in Hawlgalkaasi intii uu socday aynan cidna waxyeelo ka soo gaaren, Ninka la soo qabtay ayaa waxa la geeyay mid ka mid ah xarumaha baaritanka ee ciidanka dowladda federaalka.
Ninkaan la soo qabtay warbaahinta looma soo bandhigin sidoo kalena lama shaacin magaciisa, balse Taliska Hay’ada NISA ayaa shaaciyay in la qabtay, uuna ku jiro gacanta ciidamada dowladda.
Dhanka kale Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in howlgalo halkaas ka dhacay lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab kaddib dagaal ay la galleen xooggag is abaabulay oo la magac-baxay Macwiisley kuna sugan gobolka shabeelada dhexe.
Dagaalkaan ayaa ka dhacay degaanka lagu magacaabo Guullane oo hoostaga Degmada Aadan Yabaal ee Gobolka Shabeellaha dhexe.
Dadka deegaanku waxay sheegeenin dagaalkaas uu qasaare ka soo gaaray xoogaga shabaabka.
Xoogagga is abaabulay ee Macwisley la magacbaxay ayaa intooda badan ka howlgal deegaanno hoostaga gobollada Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan waxayna dhowr jeer oo hore dagaallo culus la galay Al-shabaabka halkaas ku sugan.
← Ciidamada ku sugan deegaanada Galmudug oo DHuusamareeb looga wacay.
Sharciga la dagaalanka musuqa oo maanta looga doodayo Kulanka aqalka sare ee Soomaaliya →